Kenya: waxaan dilnay 60 kaloo dagaalyahaniin ah | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Kenya: waxaan dilnay 60 kaloo dagaalyahaniin ah
Kenya: waxaan dilnay 60 kaloo dagaalyahaniin ah
Afhayeen u hadlay ciidamadda Kenya ee qeybta ka ah hawlgalka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM ayaa shaaca ka qaaday inay dileen ugu yaraan 60 mitidiin ah oo ka tirsan xarakada Shabaab ee Soomaaliya kaddib duqeyn dhinaca cirka ahayd oo ay ka fuliyeen duleedka deegaanka Buuloguduud ee gobolkaasi J/hoose.
“Qiimeyn hordhac ah ayaa muujinaysa in sidoo kale ay jiraan dhaawacyo kala duwan oo weerarkaasi kasoo gaadhay Al-Shabaab waxayna taasi keentay inay dib ugu gurtaan degmada Jilib,” ayaa lagu yiri bayaankaasi.
Weerarka oo dhacay goor danbe oo shalay ahayd ayaa daba socda duqeymo kale oo ay diyaaraddo ka geysteen deegaanada Caanoole iyo Kudhaa ee J/hoose, kuwaasoo ay horey ugu dileen 80 dagaalyahaniin Shabaab ahaa sida ay saraakiisha ciidamaddu ku warrameen.
Ciidamadda Kenya oo markii ugu horreysay soo gelay gudaha Soomaaliya sannadkii 2011-kii ayaa weli dagaal ba’an kula jira dagaalyahanka Al-shabaab.
Shabaab ilaa iyo imminka kama aysan hadlin khasaaraha rasmiga ah ee kasoo gaadhay weerarkaasi.
Previous articleJawaari oo lagu wado in uu gaadho Garoowe
Next articleMadaxa Somali Channel Muqdisho oo dhaawac ah